सिथि नखः वर्षा अघिको अन्तिम चाड
शुक्रराजका बाबुले देवशम्शेरलाई भने, तपाँई तीन वर्ष भित्र प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ तर छिट्टै पदच्युत
एक महिने गुँला पर्व शुरु
जेष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि अर्थात् कुमार षष्ठी। काठमाडौं उपत्यका लगायतका नेवार समुदायले सिथि नखः पर्व मनाउने दिन। यो पर्वसँगै वर्षा शुरु हुने र किसानको वर्षको महत्वपूर्ण कार्य सिन्या धान राेपाईँ (स्थानीय भाषामा ज्याः) शुरु हुने भएकोले यस चाडलाई वर्षा अघिको अन्तिम चाडको रूपमा समेत लिइन्छ। यस दिन भगवान् कुमारको जन्मदिनका रूपमा उनको पूजा गर्ने चलन छ।
सिथि नखःमा विशेषगरि पानीको मुहान, इनार, कुवा, पोखरी, धारालगायतका पानीको स्रोत सरसफाइ गरिन्छ। वर्षातका बेला बगेर आउने भेल र फोहोर पानी खानेपानीको मुहानमा मिसिएर पानी दुषित नहोस् भनी पानीको मुहान र स्रोतको वरिपरि समेत सरसफाइ गरी निकास खोल्नु यो पर्व विशेषता हो। हिँउदमा पुरिएको, थुनिएको र सुकेको मुललाई वर्षातको पानीले फुटाउने भएकाले पनि सिथि नखः को दिन पानीको मुलको सफाइ गर्ने गरिन्छ। नेवार समुदायमा सिथि नखः को दुई कारणले विशेष महत्व राख्ने गरेको संस्कृतिकर्मी प्रा. डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ बताउँछन्। पहिलो सिथि नखः महादेव पार्वतीका जेष्ठ सुपुत्र कुमारको जन्म दिन। देवीदेवता मध्ये सबैभन्दा पहिला पूजा गरिने कुमारको पूजा आराधना गर्नाले वर्षातको बेला धान रोपाई जस्तो कृषि कार्य गर्न शरीरमा बल र शक्ति प्राप्त हुने विश्वास रहेको प्रा. डा. श्रेष्ठ बताउँछन्।
दोस्रो, जात्रा पर्व सबै थाँती राखेर अन्न उत्पादनका लागि किसानहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपले पनि तयार पार्ने चाडको रूपमा सिथि नखः को विशेष महत्त्व रहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। यो दिन गरी मास, मुगी, केराउ लगायतका दलहनबाट बनेका विशेष प्रकारको पकवान ‘बारा‘ चढाउने र खाने चलन छ। त्यसैगरि घरमा भर्खर भित्रिएको नयाँ गहुँको ‘म्हुछ्यामढी’ (मुठ्ठी पारी बनाइएको विषेश खालको रोटी) समेत खाइन्छ। यस्तै चामलको चटामरी, पापड, गहुँको मालपुवा लगायतका पकवान पनि खाने चलन छ। धान खेती धेरै मेहनत र परिश्रमयुक्त खेती हो। वर्षातको झरीमा रुझेर, हिलो माटोसँग पौँठेजोरी खेल्दै गरिने धान रोपाँईंलाई अन्य खेतीपातीमा भन्दा बढी नै शक्ति र तागत आवश्यक पर्छ। यही तथ्य बुझेर नेवार समूदायले सिथि नखः को दिन शरीरमा तागत उत्पन्न गराउने मास र मुगीका बारा, चामलको चटामरी, पापड, गहुँको मालपुवा लगायतका पकवान खाने गरेको संस्कृतिविद् बताउँछन्। यस दिन बारा लगायतका पकवान खानाले शरीरमा तागत उत्पन्न हुने र वर्षा याममा धान खेती गर्न बल पुग्ने जनविश्वास छ। साथै शुद्ध भई नवदुर्गा भवानी र शक्तिपीठमा पूजा गरी नयाँ गहुँबाट तयार गरिएको परिकार चढाउनाले गहुँ उत्पादनमा बृद्धि हुनुका साथै वर्षा फाप्ने तथा घरपरिवारमा सुख शान्ति हुने जनविश्वास छ। सिथि नखः का दिन किसानहरूले खेत बारीमा काम गर्दैनन्। यो दिन खेतको माटोलाई चोट पुर्‍याउन नहुने बताइन्छ।
Yomari Cartoon Series